Abwaan Gabay ku Karbaashay Maamulka Somaliland (DAAWO MUUQAALKA) – Marqaan News
Daawo:- Siyaasi kasoo jeeda Puntland oo suaalo adag ka keenay xaqiraadda uu Kheyre kusameeyay Askarta Gadoodsan 3 hours ago
Deg-deg:- MD Xaaf oo xabsiga dhigay laba kamid ah wariyaasha Dhuusamareeb iyo sabab cajiib ah oo loo cuskaday. 4 hours ago
Sidee maanta loogu tukaday salaadii Jimcaha Masaajida New Zealand “Khudbad iyo Baroordiiq heer sare ah”. 4 hours ago
Shil naxdin leh oo ay ku la’deen ciyaal Iskuul oo ka dhacay Duleedka Boosaaso “Maydad iyo dhaawac”. 5 hours ago
Daawo Muuqaal Naxdin leh:- Shan Masaajid oo kuyaal London oo la weeraray iyo Cabsida yurub oo Korodhay. 10 hours ago
Home 2018 July Somalia, Somaliland, Wararka Maanta, Wararka Puntland iyo Somaliland, Wararka Sool Iyo Tukaraq Abwaan Gabay ku Karbaashay Maamulka Somaliland (DAAWO MUUQAALKA)
July 6, 2018 | by	marqaan | 47
Waxaan halkan ku soo bandhigaynaa gabay waddani ah oo dubka kala dagay maamulka somaliland oo sheegta in uu soomaaliya inteeda kale gaar ka yahay Gabaygan ayaa Sidoo Kale Ka Hadlaya Xaalada Guud ee Dalka Somaliya Marayo fariina u diraya cid kasta oo wadaninimo ku jirto hoos kadaawo muuqaalka gabayga
Filed in: Somalia, Somaliland, Wararka Maanta, Wararka Puntland iyo Somaliland, Wararka Sool Iyo Tukaraq
47 thoughts on “Abwaan Gabay ku Karbaashay Maamulka Somaliland (DAAWO MUUQAALKA)”
Xaaji saalax July 6, 2018 at 10:50 am · Edit
Waad fcn tahiin mar hadaad beentii iyo faankii iska dayseen,
Dab La Ridey July 6, 2018 at 12:15 pm · Edit
Ka Waran Shirki Habaryoonis maxaa ka soo Baxay
Suldaanki habaryoonis ma la soo daayey mise jeegaantu nin jira uma arkaan
Ceel afweyn xasuuqi habaryoonis ka sheekee
intaad Jeegaanta oo iyagu sameystay ”somaliland”’ aad ku daba lumeysid
Miskiin habaryoonis ah oo Lunsan baad tahay waxa keliya oo kugu jira Qabyaalad iyo nacayb Daarood sababtaas baad u ogolaatay ”” INA KAAHIN ”’ in uu xasuuqo Habaryoonista Ceel afweyn.
Xaaji Saalax intaa Horta Ka Soo Jawaab JAALLE
Wadani July 6, 2018 at 12:24 pm · Edit
War harti bootada iyo beenta maad iska deysaan? Isaaq bootadii uu iniku fahmey e nabada iska qaata meesha waxba ma soo wadiine
Xaaji saalax July 6, 2018 at 1:25 pm · Edit
Shirki habaryonis waxa kaso baxay difaaca qadiyada Somaliland,
Zxb aniga lama helayo qoraal aan ku muujiyay,naceyb qabiil,balse adigu waxaad ka jawaabta,sababta aad had iyo jeer u qorto naceybka aad
U haysid beesha isaaq,iyo beesha habargidar,waar ninyow qoraal waxba kaga qaadi mayside hadaad sidan u xanuunsan tahay orod oo furinta tag,hadii kale dhiigkar baad yurub uguu dhiman,
Prince of Maakhir July 6, 2018 at 1:53 pm · Edit
Kooxda SNM qaddiyad dhalanteed ah ayay awal ba isku luggooyeen iyaga oo isku maaweeliyay qabiil laga tiro iyo dhul badan yahay ayaa u dawladeyn kara geyi dhan oo looga sii tiro iyo dhul badan yahay mise dal dhan oo rasmi u jira qaddiyad khayaali ah ku kala dhambali kara. Hindisahaasu waxuu ahaa hawo iyo han madhan oo huuhaa ku dhisan.
Runta iyo waaqicigu waxaa u caado ah in cid kasta oo si walba uga warwareegta ay aakhirka toos u taabtaan oo xaqiiqada oggoleysiiyaan. Xaqiiqadaasu waa ta ku suntan in aanu dalkeena Soomaaliya kala qaybsami doonin marka lagu cabbiro wadciyada isku soohan ee Soomaalinimada qudheeda ku suntan. Tol waa tolane oo dhuku na waa ma guuraan iyo ma qaybsame.
Qaran dhan baa Eebbe naga yeelay ee maxaa na qaatay oo aynu qolal yar yar oo qabiil ku kooban iskugu sii kala qoqobaynaa?
Dab La Ridey July 6, 2018 at 2:13 pm · Edit
Sxb nin baa lagu yiri ”’ Ma Ogtahay in Iblis Hooyadiis Dilay ”’ Ninki Wuxu ku Jawaabay ”’ Iblis islaanti dhashay wax la Dilo wey ahayd ”’ TAAS waxaan uga jeedaa tii aad tiri maxaad habar gidir u nacda, iljeex somali oo dhan ayaa wada naca ileyn iyagaa u sabab ahaa Burburki Qaranimadi Somalida.
Tan Isaaqa ayaa kuu soo hadhay Horta bal Qabso Saldanadda warsangeli Salaadiintoodi waxaa inta badan Dhalay waa Isaaq waxayna ka guursan jireen Isaaq marka waxaan uga Jeedaa Isaaqa Nacayb nagama dhexeeyo ee waxa naga dhexeysa Qaddiyad Siyaasadeed iyo waxaanu diidanahay Meesha ay ku wadaan danta guud ee British Somaliland ee ay saldanada warsangeli meteli jirtay.Marka Sxb Tan Isaaqa walaahay nagama dhexeyso Nacayb iyo xumaan ee waa siyaasad isku Diidka.
Tan kale su’aalihi aan kusoo weydiiyey kama wada jawaabin waanse kuugu soo Celinayaa
1-INA KAAHIN XASUUQA HABARYOONIS EE UU KA WADO CEEL AFWEYN MAXAAD KA LEEDAHAY
2-WHY SHIRKI HABARYOONISTA AY UGA SOO BAXDAY IN SOMALILAND AY LEEDAHAY BEESHA JEEGAANTA LA MAGAC BAXDAY
SXB KHIYAALIGA ISKA DHAAF EE KA HADAL WIXI JIRA EE DHAB AH.
sOmalilander July 6, 2018 at 2:14 pm · Edit
Faankiii & Bootadii Masooo Afjaray Horta, Car waakase aaan idinka maqlo BOOTO danbe iyo Faataabakh danbe.
Dab La Ridey July 6, 2018 at 2:16 pm · Edit
@ Suldaan Cusman Cawad ”’Royal Family”’ May Allah Bless him
Suldaan Jimce Wanaagsan From London
waxaan kuu Rajeynayaa Kheyr,Caafimaad iyo Cimri Dheer Suldaan
Xaji saalax July 6, 2018 at 2:35 pm · Edit
Kkkkkk war zxb waad dhowdahayba hadaad ledahay aynu British Somaliland aynu wax u qaybsano
Waan kuu ogolnahay inaad xataa madaxweyne ka noqoto hadaad taa ku caafimadayso, ta kaliya ee nu diidanahay waa midnimo iyo dhalanted,laga gudbay
Ta ceelafweyn eed sida xun u dhigaysid,waxaan ka leeyahay meesha waxa isku dilaya laba jufo oo ceelbiyood isku haysta iyagaana isdhalay oo cid kasta iska xiga wayna iska dhamaan doonta.
Ta aad leedahay beel kaliya ayaa leh bay yiraahdeen zxb markay dhexdayada tahay waanu isla naqaana bootaynta iyo wax kala ridashada,
Anaba markii daahir rayaale haystay mucaradad baa nagu socotay oo waxa la oran jiray meeshaba habaryonis baa haysata,ee zxb ha dhagaysan waxani waa daasado aan ilaa snmtii isku garaaci jirnee.
War ma ila socotaa
Prince of Maakhir July 6, 2018 at 2:47 pm · Edit
@ Sacaadatul Suldaan Dab La Ridey (Baarakallaahu Fiihi Wa Xafidhadu)
Suldaankayga karaamada huwanoow si kal iyo laab ah ayaan salaanta jimcaha ee barakeysan kaaga guddoomay, aniga oo isla iyada oo la sii udgooniyay cimaamadda cizziga leh kuugu soo wadhfiyay.
Suldaanoow naftan yar ee HY ku qadhaabata anigu abidkay kama aanan qaadanin in uu yahay salaaddiintaa uu sheeganayo ee uu sidan xun sharafta uga dilayo. Waa mid ka mid ah jeegaanta oo is qarinaya oo hubanti ah. Xataa odhaahda HYda ma leh oo reerku waynu is nahay oo si baynu hawada iyo suugaanta iskaga urinaa Suldaan kkkkkkkkkkkk. Kanu ma aha ee ha ku daalin.
“Amba yaabay oo idhi…..”
Dab La Ridey July 6, 2018 at 2:50 pm · Edit
Mar hadaad ila Fahantay in British Somaliland ay nawada Khusayso ee aysan Isaaq Gooni u lahayn waa ilaahay mahadi.
Tan Labaad Afti Baa laga Qaadi doonaa ummadda Degta Ex Britsih Somaliland Haddi Aftidaas ay Noqoto in aysan Ex Britsih Somaliland aysan ka Go’in Somaliweyn waa in aad Ogolaataa. Haddi aad Leedahay anaga SNM baa nala yiraadaa waa in aanu go’naa taas waxay ka hor imanaysaa Aftidi lagu diiday in lagu Go’
Adigu ma Ogoshahay wixi ka soo Baxa Aftidaas Sxb
Mise SNM caqligeedi ayaad meeshan la soo fadhiisan.
Xaaji saalax July 6, 2018 at 3:01 pm · Edit
Caasha basbaasoy nagacyadadii badnaa baanu ku wareernay kee banu kuugu yeerna,kkkkkkkk
Maalinba mid cusub,kkkkkkkk waxan kaa quustay maalintad igu sheegtay somalilander,markaa adiga xaalkagu waa mirqaan iyo barjahaaga iska wado.
Xaaji saalax July 6, 2018 at 3:09 pm · Edit
Horta ma jirto sabab afti igu qasbaysa oo dhulkiba anaa wada haysta dadka aftida galaa waa dadka dhulkoda lahaysto sida faladtiniyinta oo kale,
Balse ninbaa oran jiray damacdaba aan yeelee,haday afti dhacdo taa qudheda waan ku kalsoonahay waayo mijoritiy baan ahey waanan ku kalsonahay,
Waar calankani inuu sii durko mooyane soo noqosho maleh,nin diida iyo nin yeelaba
Dab La Ridey July 6, 2018 at 3:21 pm · Edit
Horta Sxb Magacayga sida uu yahay u qor sababta oo ah nin iidoor ah ayaa magaca aad soo qortay ku soo gala.
Tan kale waad ku Khasban tahay AFti in la qaado haddi ictiraaf aad doonaysid haddi kale waa Ha jiifto.
Tan kale adiga iska dhaadhiciyey in aad tahay Majority laakin xaqiiqdi ma tihid sababtaas ayaa laguu yiraahdaa BEESHA DHEXE. because ma tihid majority
Tan la baad dhulkaad haysatid xaggu ku yaalaa adigoo isaaqa ah, Qolo walba maleeshiyaatkeedi ayaa jooga Gobolkooda ee Mushaaharka ka qaata Hargeisa.
Caqli Dadka Handycap ka ah ayaa ileyn kugu jira. Miskiin baad tahay Xaqiiqdi waad ka fogtahay Runta Geyiga somaliyeed yaala waad ka Hurudaa.
Xaaji saalax July 6, 2018 at 3:31 pm · Edit
Waar lowyacado ilaa tukaraq calnkii barakaysnaa ma kataagan yahay.
Ta xeebta ilaa laasasurad maka babanayaa,kkkkkkk
Maxaa hadhay laasqoray iyo ceelayana dushaan ka ilaaliya,kkkkkkkk
Zxb indhaha fur xaqiiqda ha isdidsin
Xaaji saalax July 6, 2018 at 3:35 pm · Edit
Mar haday calanka barakaysan ogolyahiin taadi waxay ka dhigan tahay inay Somaliland ogolyahiin.
Waar ma ila socotaa qar iska tuurow
Dab La Ridey July 6, 2018 at 3:52 pm · Edit
Dhul aadan Aqoon u lahayn ayaad ka Hadlaysaa miyaad taqaana Laassurad Meesha la yiraahdo wax aadan garanayn ayaad ka hadlaysaa
Horta Bal Qabso Dhulka u Dhexeeya Laasqorey iyo Ceelaayo iyo Durduri oo ah xagga Xeebta ilaa Buurta calmadow ilaaHadaaftimo,Badhan,carmale,Xingalool ila Dhahar Qof Isaaq ah ma joogo mana joogi karo waa dhul warsangeli. Waxaa kuu soo Hadhay Ceerigaabo oo ah ”’Multi-Culture City”’ oo ay wada degaan Harti & Isaaq. dhulkaas aan soo sheegay waxaa loo kala socdaa 8 hours qaarkood waxa loo socda habeen iyo maalin.
Weligaa miyaad aduunkan ku Maqashay Jabhad ayaa isu Rogtay Dawlad qaran leh.
waxaad Raadisaa sababta 27 sano ay SNM ictiraaf u weyday ?
inagu weynu iswada naqaanaa oo waqooyi ayeynu isladegnaa Beenta aad iska dhaadhicisay ee aad dadk u soo qoreysid waxba kama jiraan adna waad ogtahay in ISAAQ magaalo ay leeyihiin keliya degan yihiin.
Zeylac Ciisaa iska leh waxaan daba taagan wiil hoog la yiraahdo ismacil cumar geele oo dusha ka ilaashada maalintu la soo galay ciidanka watii isaaqu yiraahdeen ”’DIR”’ baynu isla nahay walaalo”’
Hargeisa iyo Burco iyo Berbera iyo Tog wajaale keliya ayey isaaqu leeyihiin meel kale horena uma jirin hadana Jiri mayso. Rag kale magaaladooda ma haysatid adna waad ogtahay ee BEENTA jooji Sxb
Been wax Kuma Noqonaysid inagu weynu isnaqaanaa in aadan Dawlad iyo Qaran noqonayn inta Nin Harti ah noolyahay.
Waa Habeenki Xalay ee Tegay in Lagu Ictiraafo
Hello Ma Imaqlaysaa Wiilka Ceel afweyn lagu xasuuqayo.
Dab La Ridey July 6, 2018 at 4:09 pm · Edit
@ Suldaan Prof Cisman Cawad ”Royal Family”’ may Allah be Pleases with Him
Suldaan aniguba waan ka shekisanahay qolada uu sheeganayo,sababta oo ah xita runta kama sheegayo dhibka loo geystay qoladan uu sheeganayo.
Waan ka hadhay wax weydiintiisa wale waaba nin Maansuukh ah oo seexday wakhtiyo hore.
Wuxu ku leeyahay Laasosurad xita ma yaqaano yaa dega horta. Waxaas baa habaryoonis sheeganaya.
Prince of Maakhir July 6, 2018 at 4:17 pm · Edit
@ Xaaji Saalaxoow,
Horta wax aad tahay ba iska ahaaw ee aan masalada aftida iyo siyaasadda caalamiga kaa jaahil bixiyo si baad ugu dawakhsan tahay ee.
Sida aad uga aqoon la’dahay waxaa laga dheehan karaa fahamka qaldan ee ereyga “majority”. Nacas yahoow marka aftida la qaadayo ruux kasta oo Isaaq mise qabiillada kale ah qof ka qof looga qaadi maayo waayo ilaa qiyaamaha ayay soconaysaa. Waxaa aftida lagu qaadayaa magacyada qabaa’ilka iyo beelaha geyigan ku wada dhaqan oo waxaa na laga qaadaya issimadooda guud. Siyaasi tuug ah cidi wax ka qori mayso.
Marka heerkaas aftida lagu qaado, waxay xisaabtu ku salaysnaan doontaa qabiilka Isaaq iyo qabaa’ilka iyo beelaha geyiga intooda kale. Haddaba xisaabtan qumaati u dhaad:
1. Qabiilka Dir( inta aan garanayo) = 7 beelood
2. Qabiilka Daarood = 5 beelood
3. Qabiilka Gabooye = 2 beelood
4. Qabiilka Isaaq = 6 beelood
5. Qabiilka Hawiye = 1 beel
Haddii ay aftidu u dhacdo qaab qabiil waxay natiijadu noqonaysaa sidan:
Pro-Somaliland = 2 qabiil (Isaaq + Hawiye) Anti-Somaliland = 3 qabiil
Haddii ay aftidu u dhacdo qaab beeleed natiijadu waa sidan:
Pro-Somaliland = 7 beelood (kuwa Isaaq + Fiqishinni) Anti-Somaliland = 14 beelood
Haddii ay issimada guud u dhacdo iyana sidan ayay noqon doontaa:
Pro-Somaliland = 8 Issim Anti-Somaliland = 12 Issim
Haddaba marka dhan kasta laga dheehdo mar kasta Isaaqu waa ka “minority” afti geyiga laga qaado iyo inta “Somaliland” aaminsan ba.
Prince of Maakhir July 6, 2018 at 4:22 pm · Edit
Pro-Somaliland = 7 Issim Anti-Somaliland = 12 Issim
Xaaji saal@x July 6, 2018 at 4:25 pm · Edit
Dabinki aan donayay baad kusoo dhacday,waxaagu waa isaaq nacayb uun afoo iska indho tiraya guusha uu ilaahay siiyay.
Zxb ama jabhad nagu sheeg ama maleeshiyo waxaanu nahay dadkaa calnkodu ka taagan yahay min pawyacado ilaa tukaraqkkkkkkkkkk
Lasasurad ma kuwa halamash shegan jiray een bari ka eryay baad siin,laheyd,waligaa nin kaa jilicsan maan arag war hacanta aanad goyn karin waa la dhunkadaa.
Anigu hadaan adiga ahey maban soo galeen halkan waayo doodiba kuuma furna,aan ka aheyn inaad samokuwaar qaado.
Xaaji saalax July 6, 2018 at 4:36 pm · Edit
Caasho basbaaso mawaxaad lasoo shirtagtay isimo ayaa afti laga qaadaya aduunyada ma one man one vote bay ku dhaqanyaa mise vote isino yaan umadu kula yaabin basbaasoy
Mida dhulkiba anaa haystee oo maamule sow labaduba iima fiicna in afti la qaado iyo in aan laqaadinba
Meesha waxba kuma haysaan aan aheyn nacayb isaaq ee meesha kaqulqula adiga iyo dab la ridey
Dab La Ridey July 6, 2018 at 4:54 pm · Edit
La sheekayso Suldaankayga aniga wax dambe uma soo qorayo Damiin aan Garanayn Meesha ay ku taalo Laasosurad iyo dadka dega. intaas horta soo Baro.
War ileyn Tanoo kale
Prince of Maakhir July 6, 2018 at 5:00 pm · Edit
@ Xaaji Saaqidoow,
Marka ay dooddu idin ku qalloocanto ba ” waa nacaybka Isaaq” kaga galgasha. Qof saaxi ahi ku ma hadaaqeen “calankayga ayaa meel kasta ka babbanaya” iyo “dhulkii oo dhammi Isaaq baa haysta” waayo waa hawraarta reer waalanka. Isaaqu waa beelo oo mid waliba deegaankeeda ma soo dhaafsiisna. Qabaa’ilka iyo beelaha kale na deegaannadooda iyaga ayaa ku sugan oo ka arrimiya.
Bal in aad dibjir tahay Soomaaliya oo ah dal burbur baahsan ka soo kabanaya ee aanay hayadahiisa dawligu weli sugnayn baad leedahay “one-man vote” ayaa aftida looga qaadayaa sida waddamada horumarsan ee qummaatiga u shaqeynaya. Aftidan Woqooyigu waa ” in a different context and under exceptional circumstances” sida ay UN-tu hadalka u dhigtay.
Tan kale, aftiyadu waa labo oo midi waa ta u dhexeysa Isaaqa iyo Soomaaliya inteeda kale iyo SNM-ta iyo Soomaalida kale ee geyigan la wadaagta. Ta aan anigu ka hadlayaa waa ta Woqooyiga ee ma aha ta Soomaaliya iyo SNM-ta. Nin Habar Yoonis ahi ma yidhaahdeen ” Isaaq baa la naceb yahay” oo waad is qarxisay maandhe (sOmalilander).
Xaaji saalax July 6, 2018 at 5:06 pm · Edit
Ciyarti baa soo gashee goodbye,kolay habartii atariishaa,sidii caadada u aheyd iga soo daba h
France baan la jiraa
Prince of Maakhir July 6, 2018 at 6:07 pm · Edit
“Ciyarti baa soo gashee goodbye…”
Akhyaareey jeegaantu waa taa. Doodaha dhabta ah ma xamilaan oo qiil ay kaga baxsadaan na ma waayaan.
Ahmed July 6, 2018 at 6:13 pm · Edit
@Cismaan – salaantaad cishadii dhoweyd hawada iisoo marisay waan kaa ajiibay. Adna nid taas la mid ah.
Cismaanow maanta waad iga qoslisay. Adiga Dab lariday baaba ku dhaama oo khiyaalka uu aaminsanyahay ku kalsoon inuu Afti dadka Somaliland laga qaado u badanayso in kala noqoshada lagu diido. Inkasta uusan one man one vote odhan. Laakiinse adigu waxaad calankii cadaa luxday oo doodii lagaa badiyay kolkaad tidhi qabiil ama isimo ayaa afti laga qaadayaa. Kkkk ma kuwan magan galyo doon Gadhoowe iyo Muqdisho ku jooga. Hada dhulkoodiiba qeyrkood siiba Harti weyjoogaan. Self inflicted and unnecessary asylum. Kkkk
Exception ku lahaa. Waxa kuu dhaantay inaad iskaga meereysato doodaadii aheyd Somaliland ma jirto. Waalidaas cas ayaa dhaami laheyd waxaad maanta ku hadashay. Kkkkkkk
Ahmed July 6, 2018 at 6:22 pm · Edit
Siduu xaaji saalax yidhi Afti hadanay noqoto iyo hadii kaleba Somiland anagu hadaanu nahay Beesha Isaaq kama warwarsanin. Kalsooni buuxda ayaanu ku qabnaa inay labada goorba dhankayaga guushu raaci doonto. Dood riqiis ah iyo waxaan macquul aheyn mewshan kama soconeyso.
Mucaaradka Somaliland waanu ogolnahay. Laakiinse inta ay naga soo wadhfinayaan xadka shishadiisa anagina gaashanku wuu noo daruurnaan. Warmahayaguna kama beydhi doonaan ee sida Cadawgaas kale ee na wiiq is leh ayuun bay u haleeli doonaan.
Prince of Maakhir July 6, 2018 at 7:10 pm · Edit
Issimadan aad ka tidhi (waa sida aad hadalka u dhigtay ee):
“ma kuwan magan galyo doon Gadhoowe iyo Muqdisho ku jooga. Hada dhulkoodiiba qeyrkood siiba Harti weyjoogaan. Self inflicted and unnecessary asylum. Kkkk”
Ogoobeey in aanu deelqaafkaasu qabanin oo ay yihiin madax dhaqameedyo dalkooda Soomaaliya ku sugan oo goobta ay doonaan na ka degi kara oo joogi kara. Garoowe waa Soomaaliya. Xamar waa caasimadda Soomaaliya. Burco waa Soomaaliya. Hargeysa waa Soomaaliya. Saylac waa Soomaaliya. Laasqoray waa Soomaaliya. Buulaxaawo waa Soomaaliya oo Kaambooni waa Soomaaliya.
Nin na dalkiisa qaxooti ku ma noqon karo Ahmedoow. Hadalkan isna kaa dhacay ee ah:
“Warmahayaguna kama beydhi doonaan ee sida Cadawgaas kale ee na wiiq is leh ayuun bay u haleeli doonaan”
Waa mid aad si xun isugu ceebeysay waayo adigu nin mutacallim ah oo qurbaawi ah baad tahay. Weedhaasu se waa mid geeljire iyo majnuun falan laga filayay. Ahmedoow dadka kale warmo la’aani ma hayso oo warmahaagu na kuwooda kama kulula. Xayawaanka ayaa geeso ku kala baxa oo cawaanta ayaa warmo ku kala baxda. Ilbaxdu se caqli iyo maskax ayay wax ku xaliyaan.
shaarub July 6, 2018 at 7:14 pm · Edit
asc wr wb sxbyaal akhyaarta meesha iska heshay ee hadyo jeer ku kaftanta aadbaan idiin salaamayaa dhamaantiin
anigu ma ahi nin commenti ka bixiya ama se idin soo dhex gala lkn waxaan mudo 4 bilood ah la socday weedhahaad is waydaarstaan
caawana uma soo gelin inaan idinku soo biiro blse waxaan doonayaa inaan idin sheego ama idin guudoonsiiyo abaalmarino ah sadex qof ee aan u arkay inay ugu dooda hufan yihiin ama ugu hadalka wanaagsan aniga oo aan ku qiimaynayn fikrada ama aragtida qofku xambaarsanyahay blse ku qiimeeyay habkuu usoo bandhigayo ama marayo wuxuu taageersanyahay
waayahay hadaba inta aanan soo gudbin sadexda qof ee aan doortey waxaan ka horaysiinayaa inaan iskiin baro si aydaan ugu murmin ama isu waydiin.
horta magacaygu dr. jama axmed
waxaan ahay nin habaryoonis ah oo
muuse carre ah e barasho wanaagsan
hadaan idiin sheego sadexda qof ee aan ama aan la dhacay qaabkay u doodaa
shaarub July 6, 2018 at 7:31 pm · Edit
magacyada ay sitaan waa sida tan
1.suldaanka sanaag ama cismaan cawad
3.dab la riday
Xaaji saalax July 6, 2018 at 8:08 pm · Edit
Habartii barjeyn jirtay ee magacyo badan,qabiilo badan mar halmash,mar warsangali,kkkkkkk
Ayaa mantana shegatay muse care
Xaaji saalax waa isaaq dhalad ah waana nin ku adag qadiyadiisa, weedhahiisana iska xejin maysaan sidaa aad weedhihisa u xamili waydeen ayaad warankisana u xamili ladihiin,waar anigu waxaan ahay ninka qoslaya maanta,idinkuna ciil baad la hagogantihiin.hadaba aan idinla taliyee yaanu dhiigu idinku karinee meesha ka qulqula.
Dab La Ridey July 6, 2018 at 8:12 pm · Edit
Wale shaarbihi Muuse care,Care engris waad leedahay SXB kkkkkkkkkkkkkk
aad baan kuu salaamayaa sxb. Muuse care Saldanada warsangeli suldaamo badan ayey iyagu dhaleen Maansha Allah.
Sxb waan kugu soo dhoweynaya Goobtan wixi ”’Dee Qaaf ah”’ Anigaa Xaal kaa siiyey Wale.
Anonymous July 6, 2018 at 8:27 pm · Edit
Qof kugu haysta in aad tahay ISAAQ ma Jiro weliba aniga iyo suldaankayga Prof Cusman cawad Laakin
waxaanu kugu haysanaa in aad habaryoonis tahay iyo in aad jeegaanta tahay. sidi aanu kuula hadli lahayn ayaanu garan weynay.
Habaryoonis hadaad tahay inaga isxigna qadiyada BRITISH SOMALILAND haddi ay kaa tahay Qabyaalad iyo yaa ISAAQA ah taasuna waa baab la garan karo oo dood gooni ah leh.
Anigu waxaan ku iri wale Warsangeli wey ka xunyihiin in Habaryoonis loogu xoog sheegto gobolka barakaysan ee Sanaag. adigana waxaad I leedahay wey saxsan yihiin jeegaantu waxa ay ka wado ceel afweyn. side baynu isu afgaran karna. Aniga Sanaag baan u dhashay waxaana i xiga ninki sanaag u dhasha ama ha ahaado Habaryoonis/Muuse ismaaciil/ama Muuse care/ama habar jeclo/ Adigana waxaad igala hadlaysaa Qabyaalad iyo qabiil iyo aniga adduunkoo dhan haysta aniga nin walba xoog ku haysta waadna ogtahay in ay taasu been iska tahay oo aysan jirin waxaad sheegaysid.
Anigu Isaaqa Sanaag waan kaa xigaa sababtu waxay tahay nin reer saang ah oo aan magaca aabahay u sheego wuu igaranayaa waanu igu ixtiraamayaa FULL STOP
Ha Ilaawin Awoowahay Suldaan Maxamud cali shire ilaahay janada ha ka waraabiye ayaa Wakiil ka ahaa BRITISH SOMALILAND oo heshiisyo badan la saxiixday Britishka isago metelaya Qof walba .
Marka Sxb sidaas u baro Taariikhda aadan waxba ka Ogeyn ee Sanaag.
Dab La Ridey July 6, 2018 at 8:29 pm · Edit
SORRY ANIGA QOREY MAQAALKA SARE OO MAGACAYGA KA ILAAWAY
XAAL KA QAATA KHALADKAAS
Ahmed July 6, 2018 at 9:33 pm · Edit
Sxb waa laguu dhaamaa inaad nagu dhex wareerto. Isaaq hadaanu nahay waanu naqaanaa waxa dhexdayada ka jira sidaanu u firdaamino. Doc aad naga soo gasho ood nagu kala faquuq is tishaahdaa kuuma banaana.
Somaliland danteeda hadaad rabto afaaraheeda weynu ka doodi karnaa. Laakiinse waalaga wanaagsan yahay inaad kolba nin ku faquuqdo qoladaas ma tihid.
Prince of Maakhir July 6, 2018 at 10:58 pm · Edit
Dr Jaamac Axmed waxaan kugu soo dhaweynayaa salaanta salaaddiinta Sanaag iyo Woqooyiga ee Habar Yoonis iyo Warsangali u gaarka ah. Waa sida uu hadalka iiga hormaray Suldaankeena weyn Dab La Ridey ee Dr Jaamacoow annagu waxaynu nahay asyaad dhalasho iyo dhaqan ba gaar u wadaaga oo la isu ma keen tarjumi karo. Waxaad iga guddoontaa mahad naq kal iyo laab ah ee aan taajka lagugu muunadeeyay ku udgooniyay.
Dab La Ridey July 6, 2018 at 11:16 pm · Edit
Ahmed Ma Arko Sabab aan ku dhex mashquulo Isaaq dhexdiisa wakhtina uma hayo. Waxaynu isweydiinaynaa British Somaliland dhulki la oran jirey ee ay degaan Qabaail kala duwan oo nooc walba leh Maxaa u Dan ah, Markaas waa in Ummaddaas wax laga weydiiyaa maxaa u dan ah iyo maxay doonayaan oo danta British Somaliland ay ku jirto.
Horta Ahmedow markaad hadlaysid ogow hadalkaaga waxaan ka fahmay in aad leedahay SNM waxay doonayso ayaa soconaya. Sxb Read my Lips Britsih somalialnd waxay ku dambeynaysaa in ummadda u dhalatay ee qabiil walba leh in AFTI laga qaado Taasna UN ayaa mar hore u balan qaaday dawladda dhexe. Isaaqu waxay ka mid yihiin qabaailka British Somaliland dega Hadday Minority yihiin iyo hadday majority yihiin waxaa cadeyn doona AFTIDA soo socota ee Adigu taas ku kalsoonow oo hadal jilicsan yaan lagaa garan. wadahadalka Somaliya iyo British Somaliland khilaafkiisu taas bay ahayd taasna SNM wey ogolaatay in ay sidaas u dhacdo. wada hadal ma Jiro haddi aan ummadda AFTI laga qaadin taas Ogow.
Aniga iyo Suldaan Cusman Cawad nacayb ISAAQ naguma Jiro laakin waxaanu diidanahay Anagaa circa kala hayna iyo anaga dhulka ka Dusna. Hadaad AFTI ogoshahay oo aad ku Guuleysato Bahasha markaas CIrka la tag laakin , INTA KA SOKEYSA MOORYAANTA SNM WAXAY DOONAAN HA KU HADLAAN.
inta qabiil yar oo Jeegaanta la baxay ay wax walaaqayaan wale wax ma socon karaan.Taas ogow Mr Ahmed SNM
Ahmed July 6, 2018 at 11:38 pm · Edit
Aniga iyo adigu arrinta Aftida isku arragti ayaynu ka nahay. Hadii la qabtonna waxaan hubaa inay dhankayga guushu raaci doonto.
Halkaas ayaan kaga hadhayaa taas. Ninkaan arintaas kala hadlayay Cismaan buu ahaa.
Dhanka aaf leedahay waxaan rabaa soconaya ayaan idhina l, waar saan sareba ku idhi anigu ma diidani ninkii Somaliland isaga oo gudaheeda jooga igala hadlaya waxa naga dhexeeya. Laakiinse inta dibad naga soo shiideysa ayaanu diidanahay.
Ahmed July 6, 2018 at 11:43 pm · Edit
Dr. Jaamac Axmed
Wcs. Soo dhawow sxb. Barasho wanaagsana. Waad ku mahadsan tahay sida wanaagsan ee qadarinta mudan eed noo maamuustay.
Fikrado cusub iyo cid wax nagu soo kordhisaba waanu u baahanahay ee hanagala bakhaylin arragtidaada.
Ahmed July 6, 2018 at 11:48 pm · Edit
Sxb arinta isimada anigu runbaan ka sheegay. Imisa isim ayaa Garoowe ku gabanaya? Imisa isin oo kale oo Sland kassoo horjeeda oo dhulkooda taxtaxaashaya ayaase jira? Kuwa Garoowe ku isku xanibay ma cidbaa taas ku khasabyay? Iyaga ayaa doortay. Cidina may badin ee iyagaa taas is baday. Isinku waa inuu dadkuu matalayay la joogaa. Siyaasada se inuu kundhex milmo oonay la tagto illaa xad waa qeyral masuulnimo.
Dab La Ridey July 7, 2018 at 12:59 am · Edit
Aniga iyo Isaaqa kale ee aan anigu u aqaano Mooryaanti SNM ee habeen iyo maalin halkan ku soo qora wax aan jirin ee aan xaqiiq ahayn oo aan ka jrin British Somaliland ,Arimahaas waxaa ka mid ah
1- Anagaa haysana dhulka warsangeli iyo dhulka Dhuloska
2-Anaga ka Talina oo canshuurta ka qaadna dadka oo dhan
3-Dadka sandule ayaanu kaga dhignay in ay qaataan waxa isaaqu doonayo
Arimahaas oo dhan waa Been aan waxba ka jirin, Xaqiiqda ka jirta Britsig Somaliland Qabiil walba ”’Maleeshiyaad Beeleed”’ Hubaysan ayey lahaayeen kuwi ayaa la yiri Mushaahar ayaa la idin siinayaa ee dhulkiina ilaashada . Hadaba Marka aanu maqalno Rag waaweyn oo waxaas ku hadlaya waxaad noqonaysa nin Diidan Filimka ay jeegaantu wadato.
Laakin Ahmed SNM Caawa Su’aal Ayaan ku weydiinaya ee siday tahay bal uga jawaab.
Taariikhda Isaaqa 150 sano ee la soo dhaafay waxaa ”’Leader”’ Siyaasadeed iyo mid Qabiileed u ahaa Habaryoonis marna habar jeclo, anigu ma aqaano nin habar awal ah oo ka horeeyey ina Ibrahim cigaal.
Marwalba waxaa Isaaqa leader u ahaa Habaryoonis ama Habar jeclo laakin waxaad moodaa in habar awal ay bahasha ku fashilantay hadayba ISAAQ isku kilmad ka dhigi kari waayeen oo dagaalo sokeeye ku dhex abuureen. sidaas sow xaqiiq ma aha adigo RUNTA sheegaya SXB
Prince of Maakhir July 7, 2018 at 1:24 am · Edit
Dee annagu xaqiiqada ayaynu sida ay tahay u kala dhigdhignaa oo runta is ma inkirsiinno. Adigu muddiic ku ba ahaaw issimada masalada ‘Somaliland’ kugu diiddan laakiin xaqa ha baal marin waayo adiga ayay meel-ka-dhac kugu tahay. Issimadu sida aan hore kuugu bayaamiyay Garoowe oo dalkooda ka tirsan ayay joogaan. Waa magaaladoodii ee aanay cidi ka xigin marka dhan walba laga dheehdo.
Haddii ay se Garoowe u yimaaddeen iyaga oo maleeshiyada SNM-ta naftooda ka la soo cararay dee xaq buuxa ayay u leeyihiin oo wuxuush aan waxba xeerinin baa naftooda halisa galisay. Ceebta iyo cadaabta Alle ba waxay dul hoganayaan wuxuushtan issimada xaq darada iyo sabab la’aanta ku khaarajin rabta.
Ahmedoow in uu issim reer Awdal ahi Garoowe naftiisa u la soo baxsado adiga iyo adeerkaa ee uu waajibka badbaadadiisu idin saaran yahay ayay fadeexo, fool xumo iyo dembi weyn idin ku tahay ee la soco. Wax lagu faano ma aha diin ahaan, dhaqan ahaan iyo dadnimo ahaan toona. Annagu se guul iyo gobanimo aynu dhaxal iyo farac u leennahay ayay inoo tahay in aynu Soomaali walaalkeen ah dhibaato iyo cadaw ka badbaadinno.
Ahmed July 7, 2018 at 1:37 am · Edit
Cismaanow welli waxaad isku sii maqiiqaysaa meeshaas khaldan eed wax ishaareyso.
Ninka isimka ah ee Sool ama Sanaag udhashay isaga ee isagu halkaas iska fadhiistay isaga arintaasi masoo dhaafsana. Maxaa loo dilli waayay ama il qaloocan loogu eegi waayay kuwa kheyrkii ah ee Sool wada tuban ee hadh iyo habeen Somaliland baanu kasoo horjeednaada haya? Kuwaas kol tuulo ku shira maa wax la yidhaahdo.
Kan Samaroon ee Muqdiaho ka yimid anigu maba aqaano. Wrligayna kuma arag isaga oo Somaliland dhexdeeda ka hadlaya sida kuwa qeyrkiis ah ee Boorame iyo Gabileyba waxay doonaan ka dhex yidhaahda.
Khayaali ayaad welli wadaa. Naftan baas ee ay la irdayaan miyaanay kuwa kale ee la midka ah ku jirin?
Prince of Maakhir July 7, 2018 at 3:25 am · Edit
Sool, Sanaag, Cayn, Bari, Nugaal iyo Mudugta Woqooyi waa geyi ay wadagaan oo kuna walaaleysan yihiin beelaha ku dhaqani. Dhul iyo dhiig iyo dhaxaltooyo ayaa is baday oo isku xidhaya. Waxaa fajac dadka ku noqday in aad issim iyo dad Sool mise Sanaag ka soo jeeda ku cambaareyso in ay Nugaal ku sugan yihiin oo aad u ekeysiiso Yahuudi inta uu Tel Aviv ka soo ruqaansaday Ghazza soo degay.
Nin Dhulbahante ah ayaa inta uu Boocame ka soo tagay Garoowe “isku xannibay” mise “qaxooti” ku ah allaylehe taariikdha adduunyada waxaa laga hayaa oo keli ah nimankiinan iidoor! Dee waynaan arag oo maqal idinka hortiin!
Ahmed July 7, 2018 at 4:23 am · Edit
Waxaasaan hadal iskaga khasaarinayaa maanta oo dhan. Waa nin aanan warka dulucdiisuba u dhacey. Horta sideed wax u fahantaa?
Dab La Ridey July 7, 2018 at 9:30 pm · Edit
Anigu shakhsi ahaan markaan RAGA KELIYA ka hadlo wxaan aaminsanahay ”’QANIINYO QANIINYO KALE AYAA KAA FUJISA”’
Marka anigu Haddi Somalilander iyo xaaji saalax khamri soo cabaan oo waxay doonaan ku hadlaan waa in uu nin raga la walaaqdaa waxay wadaan si ay u fahmaan xaqiiqda. LAAKIN anigu dumar waan ka soo horjeeda ka hadalkooda iyo wax ka sheegooda.
Haatan iyo Dan.
Somalilander iyo xaaji saalax waa AL-koholic nolosha ka dhacay adna waad ogtahay marka soo cabaan in ay Rag iyo dumar caayaan marka DEAL ma sameyn kartid sababta oo ah ma qaban kartid kuwaas Anaguse waanu qaban karna ALI. taas anigaa kaaga balan qaaday. laakin adigu waxba ma qaban kartid ee meeshan hadal jilicsan baad ku haysaa.
LA SHEEKAYSO SULDAANKAYGA ”” may allah bless him ””